Nagarik Shukrabar - निद्रा लागेन ? यसो गर्नुस्
निद्रा लागेन ? यसो गर्नुस्
सोमबार, ०४ पुष २०७३, ०९ : १० | शुक्रवार , Kathmandu
मनमा कुरा खेल्ने, चिन्ता र तनावलगायत कारणले कतिपयलाई निद्रा नलाग्ने समस्याले सताउँछ । पर्याप्त निदाइएन भने डायबेटिज, डिप्रेसन, मोटोपनजस्ता समस्या उत्पन्न हुने गर्छन् । छिट्टै निदाउन यसो गर्नुहोस्ः
दिउँसो दुई बजेपछि चिया र कफीजस्ता केफिनयुक्त पेय पिउन छोड्नुपर्छ । राति खाना खाएर अथवा सुत्नअघि चिया, कफी आदि खाने बानी छ भने त्यो बानी चटक्कै छोड्नुपर्छ । किनकि, यस्ता पेयमा पाइने केफिनले व्यक्तिलाई निदाउन दिँदैन ।
निद्रा लागोस् भनेर सुत्नुअघि मदिरा पिउने गर्नुभएको छ भने त्यो बानी सुधारिहाल्नुस् । मदिरा पिएपछि निद्रा लाग्छ तर एक पटक बिउँझिएपछि पुनः निदाउन गाह्रो पर्छ । मदिरा खाने बानी भएकाले सुत्नुभन्दा दुई घण्टाअघि पिउनु तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुन्छ ।
मस्त निदाउन बढी मदिरा पिउने गर्नुभएको छ भने आजैदेखि त्यो बानी छोड्नुहोस् । बढी मदिरा पिएमा शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन्छ, जसले गर्दा निद्रा बिथोलिन्छ । शरीर डिहाइड्रेट हुँदा प्यास बढी लाग्छ । सुत्नेबेला बढी पानी खाइयो भने पिसाब फेर्न उठिरहनुपर्छ ।